Squarespace: M Wuru A Spa Weebụ na Storelọ Ahịa Online na Ntọala Ntọala na Otu inbọchị | Martech Zone
Ọ bụrụ na nke ahụ dị ka ekweghị ekwe, ọ bụghị. Enyi m nwanyi bu onye na-agwọ ọrịa na ịhịa aka na Fishers, Indiana. M ga-ewu ya saịtị na ọnwa ole na ole gara aga, mana enweghị ike n'ihi ọrụ ndị ahịa nke butere ụzọ. Ọsọ ọsọ na-emechi ma mechie ọtụtụ ọrụ ahụ n'akụkụ ụzọ ebe ndị ahịa m kwụsịtụrụ atụmatụ ma ọ bụ gbanwee ihe ndị ka mkpa iji wee merie mfu ego ha na-enweta.
Ọ bụrụ na m ga-ewu saịtị na WordPress, enwere m ike iji otu izu ma ọ bụ abụọ na-etinye mgbakwunye dị iche iche, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, na ịchọ ụdị usoro ịhazi usoro. N'ihi na Steph enweghị ịnụ ọkụ n'obi na teknụzụ, ọ nwere ike ọ ga-esiri ya ike ijikwa. Ya mere, ekpebiri m iji Squarespace maka ntụgharị.
Amalitere m iwu ebe ahụ ihe dịka elekere asatọ nke ụtụtụ… ma na-ekpori ndụ nke ukwuu na m rụrụ ọrụ ruo elekere 8:00 nke ụtụtụ echi ya mgbe emechara ya. Ihe m nwere ike ime bụ ihe dị egwu - nweere onwe gị ịpị ma chọpụta saịtị ahụ.
Ebe ọ bụ na a na-emechi spa Steph ugbu a site na ọrịa ahụ, ọ chọrọ ịwelite saịtị ahụ ma gbakwunye ikike maka ndị ahịa ịzụta kaadị onyinye… ọbụna na-atụfu ego ma ọ bụrụ na kaadị onyinye bụ maka ndị izizi mbụ ma ọ bụ ndị ọrụ ahụike. Enwere m ike imezu ya niile.
Squarespace's all-in-one platform na-enye gị ihe niile ị chọrọ iji na-agba ọsọ azụmahịa gị. Ma ị na-amalite ma ọ bụ na ị bụ akara amaala ama ama, ntọala ha na-enyere weebụsaịtị azụmaahịa gị aka. Squarespace nwere mmelite na nhọrọ ndị dị ugbu a mbelata ma ọ bụ n'efu n'oge nsogbu COVID-19 dị ka nke ọma.
N'ihe na-erughị awa 24, arụpụtara m ihe niile na-enweghị otu akara koodu:
Azịza zuru ezu, mara mma weebụsaịtị
Onye ndezi na-ebe nrụọrụ weebụ na-edezi
Ogwe ọkwa mara ọkwa n'elu saịtị ahụ
Ecommerce maka ire ere ngwaahịa
Oge akara aka na email na ihe ncheta ederede
Kalịnda mwekota n'etiti ịhọpụta usoro ihe omume na Google
Nwepu akwukwo ozi Email na okike
Nweta usoro agbadoro ego
Mentkwụ gategwọ ọnụ ụzọ mwekota na Square maka naa ahịa na ya spa
Integrationkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ mbanye na PayPal maka ire ahịa n'ịntanetị
A blog maka Steph iji kesaa akụkọ na mmelite na
Mpaghara onye ọrụ Squarespace nwere usoro mmụta, mana enyemaka ha na ntanetị na nkuzi na-enye ozi niile ịchọrọ. Inweta ihe niile n’arụghị ọrụ ọ bụla, mana ọ dị nso. Dịka ọmụmaatụ, Usoro Nhazi na Ecommerce bụ ngalaba abụọ dị iche iche nke saịtị nke ọ bụla chọrọ ntinye ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ha.
Na, Squarespace nwere ụfọdụ ezigbo ngwugwu ngwugwu… fọrọ nke nta ka ihe niile m chọrọ iji nweta ihe niile na-arụ ọrụ bụ nweta nkwalite ọhụrụ ngwugwu. Anaghị m eme mkpesa, mana kwadebe ịpị bọtịnụ nkwalite ugboro ole na ole ka ị na-achọpụta atụmatụ ndị ịchọrọ iji nweta ihe niile ịchọrọ. Mepụta saịtị dum n'otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ maka ihe na-erughị $ 1,000 kwa afọ na atụmatụ ndị a niile dị ịtụnanya!
The Usoro Squarespace nweta nkwalite nwere ihe niile ịchọrọ iji rụọ ọrụ nke gị nke chọrọ nhọpụta. Ọ bụ ọrụ zuru oke maka ndị ahịa gị nwere ọtụtụ atụmatụ:
Nchịkọta Kalịnda - Na akpaghị aka melite kalenda ị na-eji, dị ka Google, Outlook, iCloud, ma ọ bụ Office 365.
Nkwụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ - Jikọta na usoro ịkwụ ụgwọ iji kwụọ ndị ahịa ụgwọ tupu ma ọ bụ mgbe emechara.
Video Conferencing - N'agbanyeghị ebe ndị ahịa gị nọ, jiri ihu na ihu mmekọrịta GoToMeeting, Zoom, na JoinMe.
Ahaziri Communication - Zipu ahaaka ma ahaziri nkwenye, ncheta na ntinye. Style ihe niile iji kwekọọ n'ọdịdị na mmetụta nke azụmahịa gị.
Ndebanye aha, Kaadị onyinye, na nchịkọta - Kpalite ndị ahịa gị site n’itinyekwu ụzọ iji akwụkwọ. (Dị na họrọ atụmatụ.)
Intdị oriri omenala - Mụta maka ndị ahịa ọhụụ ma ọ bụ mara nke ọma na ndị ahịa na-alọghachi na ụdị nnabata ụdị.
Iwulite ulo ahia intaneti ere ngwaahịa dijitalụ ma ọ bụ nke a na-ebute n'ụzọ dị mfe na Squarespace. Ọbụna ha nwere tinye-ons maka nnyefe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke nwere ike ịba uru n'oge mkpọchi a. Ecommerce gụnyere gụnyere:
shop - Ngwa ahia, hazie, ma jikwaa ọnụọgụ ngwaahịa na-enweghị njedebe na mkpado, edemede, na ngwa ntinye na-dobe anyị.
Ntinye ọdịnaya - A na-etinye ngwaahịa ọ bụla ị na-ere n'ime katalọgụ ya mere ọ dị mfe iji ọzọ na ntanetị na mgbasa ozi email.
usoro ihe omume - Gaa n'ihu ahịa, nkwalite, na usoro ngwaahịa ọhụrụ site na ịhazi usoro ngwaahịa ịpụta na ụbọchị akọwapụtara.
Ndepụta Ngwaahịa - Jikwaa ngwa ahịa gị na interface dị mfe iji yana nlele ọsọ ọsọ n'ime ụdị dị iche iche gị na ọkwa ngwaahịa gị. Pụrụ ọbụna ịtọ alerts elu.
Kaadị onyinye - Kaadị onyinye bụ ụzọ dị mfe ndị ahịa ga-esi soro ezinụlọ ha na ndị enyi ha kerịta ngwaahịa gị.
ndebanye aha - Nweta ego ị na-enweta ugboro ugboro ma wuo iguzosi ike n'ihe ndị ahịa site na ire ndenye aha na ngwaahịa gị kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa.
Ọnụ ụzọ ọnụ - Were ụgwọ site na ụlọ ọrụ na-eduga njikọta na Stripe na PayPal.
Nhazi ndenye ego - tinye nyocha ndị ahịa ma ọ bụ nhọrọ ịkekọrịta ozi onyinye.
Mbupu - Inweta atụmatụ mbupu oge maka ndị ahịa US n'oge ịpụpụ yana ngwa mbufe dị ike yana njikọta
Nyocha - Nhọrọ sitere na igbe nyocha HTML dị mfe iji tinye ntinye nyocha nke ndị ahịa na Facebook.
Njikọ mmekọrịta - Jiri ngwaahịa Facebook, Twitter, na Pinterest kesaa ngwa ahịa gị ngwa ngwa, ma kpagide ngwaahịa na ntanetị Instagram gị.
Squarespace Email .zụ ahịa
Integrated email email na Squarespace dị mma nke ukwuu cl enweghị njikọta ma ọlị. Atụmatụ gụnyere:
Automation - Nabata ndị debanyere aha gị na listi nzipu ozi gị, zigara ha ego onye ọhụụ ọhụrụ, na ndị ọzọ jiri ozi ịntanetị na-akpaghị aka. Nọgide na-eche echiche ma wulite mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị na-enweghị ịpị izipu ozi.
Kensinammuo Kpọtụrụ List Management - Bubata ndepụta email, jiri amamihe rụọ ha site na mpaghara email na saịtị gị, ma ọ bụ mepụta ndepụta ọhụrụ maka mkpọsa.
Personalization - Gụnye aha onye debanyere aha gị na ahịrị isiokwu ma ọ bụ ahụ nke mkpọsa gị iji gbakwunye aka gị na mkpọsa ọ bụla ị zitere.
Squarespace Mobile Na-edezi Ngwa
Squarespace nwekwara nnukwu ngwa ntinye ederede maka Apple na android, na-enyere ndị nwe ụlọ ọrụ aka idezi saịtị ha na ekwentị ha.
Ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla nwere ike na adịghị ike. N'ezie, usoro mmepe omenala nwere ike inye mgbanwe na-enweghị ngwụcha ma e jiri ya tụnyere ikpo okwu dị ka Squarespace. Agbanyeghị, uru nke ikpo okwu siri ike niile dị ka nke a kariri erughị eru site na maịl. Ihe ọ ga-efu karịrị akarị.
Nanị okwu m gbabara na mwube saịtị ahụ bụ na enyi m nwanyị mgbe ụfọdụ ka ndị mmadụ bịarute ma chọọ ịkwụ ụgwọ na-mmadụ karịa ịntanetị. O di nwute na, Squarespace POS di nma maka ihe ahia ulo ahia, mana achia atumatu a egosighi na ngwa a iji kwado ha n'onwe ha.
Ọzọkwa, ebe Square dị ka ihe nhazi usoro ịkwụ ụgwọ, enweghị ụzọ iji mekọrịta ụdị nhọpụta n'ime Square. N'ezie, enweghi ụzọ iji bupu ozi ahụ n'ụzọ dị mfe maka ibubata na Square. N'ihi ya, agara m tinye aka tinye ụdị nhọpụta na mgbakwunye na akaụntụ nnabata enyi nwanyị m. Enwere m olileanya na njirimara dị mkpa ejikọtara n'oge na-adịghị anya!
Gaa Leta Ntanetị
Akụkụ akụkụ… Adịghị m Mgbakwunye nke Squarespace… just a fan. Ha anaghị enye ndị mmekọ ndị bi na Indiana. Ihe ikpo okwu a masiri m nke ukwuu na otu m si nwee ike nweta saịtị Steph!
Tags: nile na-na-otukalendausoro ihe omumeecommercedezie-na-ebekaadị onyinyennyocha ngwaahịanzukọ ọgbakọ vidioebe nrụọrụ weebụ